Smart Tools - Handy Carpenter Box 17.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 17.3 လြန္ခဲ့ေသာ5လက
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Smart Tools - Handy Carpenter Box
Smart Tools - Handy Carpenter Box ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Smart Tools - Handy Carpenter Box isahandy toolbox app with 40 smart carpenter and metering tools like bubble level, ruler, distance meter, DB meter, protractor, heart rate monitor (cardiograph), speed gun, magnetic field (metal detector), bar and QR code reader... Use device's in-built sensors in all in one tool box app, handy likeaswiss army knife.
Code scanner: Scan QR code and bar code;
စမတ် Tools များ - နေရာလေးကိုလက်သမား Box ကိုပူဖောင်းအဆင့်ကိုအစိုးရသောမင်း, အကွာအဝေးမီတာ, DB မီတာ, protractor, နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာ (cardiograph), မြန်နှုန်းသေနတ်, သံလိုက်စက်ကွင်း (သတ္တု detector), ဘားတူသော 40 မတ်လက်သမားနှင့်မီတာ tools များနှင့်အတူတစ်နေရာလေးကို Toolbox App ဖြစ်ပါတယ် နှင့် QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကို ... အသုံးပြုမှု device ကိုရဲ့ In-built ဆွစ်စစ်တပ်ကဓါးများကဲ့သို့နေရာလေးကိုတဦးတည်း tool ကိုသေတ္တာ app ထဲမှာအားလုံးအတွက်အာရုံခံကိရိယာ။
လက်သမား tool ကိုစာရင်း:
ပူဖောင်းအဆငျ့: မျက်နှာပြင်အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ပူဖောင်းအဆင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,
အလင်းကို: တစ်လက်စွဲစာအုပ်မီးရှူးတိုင်အလင်း, strobing light သို့မဟုတ်အသံမောင်းနှင်အလင်းပြပွဲအဖြစ်အသုံးပြုပါ,
Protractor: မည်သည့်အရာဝတ္ထု၏ဆင်ခြေလျှောခြင်းနှင့်ထောင့်တိုင်းတာပါ။ Protractor ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,
tool ကိုစာရင်း Metering:
DB မီတာ: အသံ DB အဆင့်နှင့်ယင်း၏ရောင်စဉ်တိုင်းတာပါ။ DB မီတာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,
အဝေးသင်မီတာ: အကွာအဝေးတိုင်းတာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာဝတ္ထု၏အမြင့်။ အဝေးသင်မီတာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,
သံလိုက်စက်ကွင်း (သတ္တု detector);
Luminosity (Lux) မီတာ,
အခွားသောနေရာလေးကို tool ကိုစာရင်း:
ယူနစ်နှင့်ငွေကြေး converter ကို;
Code ကိုစကင်နာ: QR ကုဒ်ကိုနှင့်ဘားကုဒ်စကင်ဖတ်,
ဒီ app အားလုံး device ကိုအမှတ်တံဆိပ် (က Samsung, Sony, HTC, LG တို့, Huawei Lenovo ကတိုရှီဘာနှင့်အခြားသူများ) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အားလုံးမော်ဒယ်များအားလုံး tools တွေကိုပံ့ပိုးကူညီရန်အသင့်လျော်သည့် sensor များရှိသည်မဟုတ်။ ဒါဟာအများအားဖြင့်က Samsung, Sony, HTC, LG တို့, Huawei Lenovo ကများနှင့်တိုရှီဘာပျေါတှငျစမျးသပျဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ခံမှုများအတွက် FB စာမျက်နှာထွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခမဲ့ခံစားရ: http://bit.ly/3N8UysR
ကြော်ငြာများဖြင့်အခမဲ့ app ကို။
Smart Tools - Handy Carpenter Box အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Smart Tools - Handy Carpenter Box အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Smart Tools - Handy Carpenter Box အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Smart Tools - Handy Carpenter Box အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.71M 3538.76M
Smart Tools - Handy Carpenter Box ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Smart Tools - Handy Carpenter Box အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 17.3
ထုတ်လုပ်သူ PC Mehanik
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.pcmehanik.com/privacy
App Name: Smart Tools - Handy Carpenter Box
လက်မှတ် SHA1: D4:D5:8D:E0:8F:10:6B:AE:3E:11:AA:3F:47:60:63:FD:49:AE:0F:3C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Matjaž Marolt
Smart Tools - Handy Carpenter Box APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ